Dhacdoyinka Caalamka | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News | Page 3
Home Dhacdoyinka Caalamka Page 3
Xisbiga Ileys oo Taageeray Soona Dhaweeyey Xubnaha Xildhibaanada La Dhaariyey ee Barlamanka 2’aad ee Jubaland.
Duco loo sameeyey allaha u naxariistee ugaas C/raxmaan ugas KHaliif oo ka dhacey Yurub iyo Mareykanka.
Kulammo loogu duceynayay ALLAHA u naxariistee Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif oo todobaadkii lasoo dhaafay ku geeriyooday magaalada Baladweyne ayaa siyaabo kala duwan loogu qabtay magaalada Minnesota ee Mareykanka iyo magaalada Den-Haag ee dalka Netherland. Kulankii lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana kasoo qayb-galay Culummada, odayaasha-dhaqanka, Aqoon-yahanno, dumar iyo xubnaha...
UMP; isbaheysiga haya talada dalka Jabuuti oo mar kale shaaciyey in musharaxoodu yahey Ismaaciil Cumar Geelle iyo mucaaradkoo diidey!!.
Isbahaysiga haya Talada Jabuuti ee UMP ayaa xalay u doortay madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle inuu yahay musharraxa ugu qayb-galaya tartanka doorashada madaxweynennimo ee dalka Jabuuti ka dhici doona sannadkan 2016-ka. Dhawaan ayaa Madaxweynaha Jabuuti sheegay inuu doonayo in hoggaanka Jabuuti uu mar kale isku soo taago, isagoo xilka Jabuuti...
Sadexda Xisbi ee Somaliland & gudiga doorashooyinka ayaa maanta kala saxiixday xeerka hab-dhaqanka (code of conduct) ee diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha iyo doorashooyinka. Saddexda Xisbi ayaa soo dhaweeyey Xeerkaan Hab-dhaqanka Diiwaan-gelinta cod-bixiye-yaaashu u socon doonta, isla markaana ku wada shaqayn doonaan saddexda xisbi qaran iyo guddida doorashooyinka taas ay soo diyaarisay Akadamiga...
Yuusuf Dabageed; Gud/gobolka Hiiraan oo la kulmey madaxda xafiiska Q/M u qaabilsan gobolka Hiiraan.
Guudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar oo ay wehliyaan mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo saraakiil ka tirsan AMISOM ayaa kulan la qaatay madaxa xafiiska siyaasada QM, Magnus Bjarnason. Kulanka oo la dhacay xafiiska QM ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa goob joog ka ahaa taliyaha ciidammada Jabuuti ee qeybta...
Prof. Jawaari oo u jawaabey C/kariim Xuseen Guuleed sheegeyna in uu nabadda meel walba u tagayo.
Gudoonka Baarlamanka dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cismaan Jawaari ayaa sheegay in dowladda Somalia ayaa xoogga saari doonto arrimaha dib u heshiisiinta iyo sidii loosoo celin lahaa nabadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed.Mudane Jawaari oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa intii uu halkaasi joogay kulamo goni goonoi ah la qaatay masuuliyiinta...
Turkiga oo ku dhawaaqey in ay saldhig milateri ka sameyneyso Soomaaliya/waa maxey sababtu?
Xukuumadda Turkiga ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaadday inay saldhig millateri ka sameysanayso Somalia, taasoo qayb ka ah ballan-qaad ay kala saxiixdeen labada xukuumadoood oo lagu taageerayo dhismaha ciidamada Qalabka Sida ee Somalia iyo qalabeyntooda. Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa qorshaha saldhiggan ay uga hirgelinayso dalka Somalia ku sheegtay...
Airporka Boosaaso oo xarigga laga jarey iyo m/weyne Xasan SHeekhoo khudbad ka jeediyey.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb-galey xaflad lagu furayay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo dhawaan dayac-tir lagu sameeyay. Xasan Sheekh oo khudbad ka jeediyay xafladda furitaanka Garoonka ayaa sheegay in hir-gelinta mashruucan uu ka tarjumayo dib u dhiska iyo dib u soo kabashada...
Xukuumadda Soomaaliya oo mamnuucdey in qabto xaflado loogu dabaal degayo sanadka milaadiga.
Wasaaradda owqaafta iyo arrimaha diinta Somalia ayaa ka digtay Xuska munaasabadda ciidda kirismaska ee masiixiga iyo xafladaha kale ee loogu dabaal-dago billowga sanad walba, iyadoo ku amartay hay’adaha amniga dowladda Soomaaliya inay ka hortagto haddii la isku dayo in Muqdisho laga abaabulo xaflad noocaas ah. Agaasimaha wasaarada Owqaafta iyo arrimaha...
Dagaal yahanada Daalibaan oo weerarey magaalada Sangins ee gobolka HELMAND.
Ururka Taliban ee ka dagaalama dalka Afghanistan ayaa maanta weerar ku qaaday saldhiga booliiska magaalada muhiimka ah ee Sangins, sida laga soo xigtay mas’uuliyiin ka tirsan xukuumadda Afgaanistaan. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya cida gacanta ku haysa maammulka degmada Sangins oo ku taalla gobolka Helmand, iyadoo guddoomiyaha gobolkaas & booliisku...
Hay’adda Amnesty International ayaa ku sheegay warbixin ay kaga hadlaysay xaaladaha dalka Burundi in ciidamada ammaanka dalkaas ay si xeeladeysan u dileen tobaneeyo qof oo shacab ah intii ay socdeen rabshadihii 11-kii bishan ka dhacay magaalada Bujumbura ee xarunta Burundi. Amnesty ayaa warbixinteeda ku xustay in qaar ka mid ah...